Ahoana ny fomba hanampiana mari-drano amin'ny sary ao amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Androany dia misy mpanakanto sy mpamorona maro izay efa manadino ny mametraka mari-drano amin'ny asan'izy ireo izay hivarotan'izy ireo na hasehony amin'ny haino aman-jery nomerika; toy ny Instagram, Facebook, Behance ary maro hafa. Izany dia satria ny asa famolavolana dia matetika aseho tsara kokoa nefa tsy manampy fanampiny izay mahavita "manelingelina" ny mason'ity mpanjifa ho avy ity, na dia mety hitranga foana aza ny olona iray raha hampiasa hosoka amin'ny sary nataontsika.
Mbola betsaka ny mametraka ny mari-drano misy azy ireo ary, noho izany, hasehonay anao ny fomba fametrahana azy ao amin'ny Adobe Photoshop, miampy izay mety ho antsipirihany tokony horaisina. Miatrika toe-javatra iray izay izahay misy ifandraisany bebe kokoa amin'ny toerana, ny habe ary ny fahamoran'ny mari-drano, ny teknikan'ny tena manokana amin'ny fakana tahaka ny sary famantarana ary apetaho amin'ilay sary. Andao ary ho tonga any io miaraka amin'ilay mari-drano ao amin'ny Photoshop.
Manoro hevitra an'izany izahay mandalo ity fampianarana ity mba hahafantaranao ny manala ny ambadiky ny sary (tsarovy ny hitahiry azy amin'ny PNG), amin'ity tranga ity ny sary famantarana, na dia heverinay aza fa efa nandalo ihany koa ianao avy amin'ny tranokala famoronana sary famantarana izany, amin'ny alàlan'ny default, efa mamela anao misintona ny sary famantarana amin'ny PNG.
Ny voalohany dia manana ny sary famantarana anay amin'ny endrika PNG miaraka ambadika mangarahara.
Control + A hisafidianana ny sary iray manontolo.
Fehezo + C handika ny fifantenana.
Fehezo + V hametahana ny sary te hiaro amin'ny mari-drano misy antsika.
Efa napetraka miaraka amin'ny mari-drano toy ny sosona amin'ny sary tiana harovana, tsy maintsy takatsika inona no ampahany tena mahaliana antsika «hikarakara». Ao amin'ny sarin'ny pizza azonao jerena etsy ambany, satria ny ampahany sy ny pizza mihitsy no tena manintona ny sary, tsy maintsy mitandrina isika hametraka mitsangana sy mitsivalana ny sary, ka sarotra ny manapaka an'io sary io raha tsy misy raiso mialoha ny iray amin'ireo "fifantohana amin'ny maso".
ireo ohatra roa no mampiseho izay voalaza tsara, sary iray izay misy ny sary famantarana tsara, ary manome antoka fa tsy misy dikany ny fanapahana hatao, ary sary iray hafa, noho ny toerana tsy dia tsara sy ny hakeliny, dia mamela azy ireo manapaka sary iray mendrika izany.
Ratsy toerana amin'ny alàlan'ny famelana hanapaka sary toa tsara:
Tsara toerana Amin'ny tsy famelana ny sary hokapaina, izay voakapa dia tsy mendrika izany:
Apetrakay amin'ny haavo sy ny faravodilanitra ny sary famantarana ny "zava-dehibe" ny sary.
Mandeha amin'ny opacity ny logo izahay ary mampidina azy ampy ka tsy dia tsikaritra loatra, na dia hita aza raha mijery tsara kokoa ny sary.
Podemos manova habe kely mba tsy eo ilay sary famantarana.
Ya ho vonona ny mari-drano napetraka tamim-pahakingana ka io "mpangalatra kely" io dia tsy afaka mangalatra ny ampahany manan-danja indrindra amin'ny sary, izay amin'ity tranga ity dia mety ho izay voalaza momba ny ampahany tapaka sy ny pizza mihitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ahoana ny fametrahana mari-drano ao amin'ny Photoshop